फेरिदैँ बिद्यालयका मुहार « Salyan Today
फेरिदैँ बिद्यालयका मुहार
सल्यान १२, फागुन ।
गत पुस ७ गते सल्यान टुडे डटकमले कक्षाकोठामा खाल्टैखाल्टा शिर्षकको समाचार प्रकाशित ग¥यो । सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर ९ बागचौरमा रहेको कृष्ण आधारभूत बिद्यालयको भवन जिर्ण हुदा बिद्यार्थीहरुले बेन्चडेस्क बिना खाल्टैखाल्टा भएको कक्षाकोठामा एकसरो कार्पेटमा बसेर पढ्दै आएको समाचार प्रकाशित भयो ।
त्यसको केही दिनपछि पुस १७ गते पानी परे कक्षाकोठा खाली शिर्षकको सल्यान टुडे डटकमबाट नै प्रकाशित भयो । २०७६ साल चैत ११ गते बेलुकी आएको हावाहुरीले जस्तापाताले छाएको दुइ कोठे बिद्यालय भवनको छाना उडाएपछि खुल्ला आकाशमुनि पढ्न बिद्यार्थी बाध्य छन् भनेर शारदा नगरपालिका वडा नम्बर १० पैयाखर्कमा रहेको जनता प्राथामिक बिद्यालयको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
समाचार प्रकाशित भएको झण्डै २ महिनापछि ती बिद्यालयको मुहार फेरिन थालेको छ । शारदा नगरपालिकाले ती बिद्यालयको मर्मत गर्नथालेपछि बिद्यालयको मुहार फेरिन थालेको हो भने पठनपाठनमा पनि सहज भएको बिद्यार्थीहरुले बताएका छन् । कृष्ण आधारभूत बिद्यालयका ४ वटा भवनका ७ वटा कक्षाकोठामा परेका खाल्टाखुल्टी पुरेर भुइ प्लास्टर गरिएको छ ।
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रु. ४ लाख रुपैँयाबाट कक्षाकोठाका भुइमा प्लास्टर, दश जोर डेस्कबेन्च निर्माण, शौचालय मर्मत कार्य गरिएको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक बिरेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । समाचारकै प्रभावका कारण तत्कालै बिद्यालय सुधारको कार्य थालनी गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो बिद्यालयमा गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी रहेका छन् । यस बिद्यालयमा २ सय बढी बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आएका छन् ।
यस्तै हावाहुरीले बिद्यालयको छाना उडाएको झण्डै २ बर्षपछि जनता प्राथामिक बिद्यालयको दुई कोठे भवनको मर्मतसँगै नयाँ जस्तापाता राखिएको छ । वडा कार्यालयको रु. ३ लाख रुपैँयाबाट जस्तापाता खरिदसँगै भवन मर्मत गरिएको प्रधानाध्यापक डम्बर चलाउनेले बताउनुभएको छ । हालैमात्र जस्तापाताले भवन छाइएको उहाँको भनाइ छ ।
बिद्यालयको छाना हावाहुरीले उडाएपछि बिद्यार्थीहरु खुला आकाशमुनी बसेर पढ्न बाध्य भएका थिए, पानी परेको दिन बिद्यार्थी बिद्यालयमा आउनै छोडेका थिए उहाँले भन्नुभयो भवन मर्मत भएसँगै बिद्यार्थीहरुलाई बसेर पढ्न सहज भएको छ । २०३३ सालमा स्थापना भएको यस बिद्यालयमा अहिले ६३ जना बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कक्षा ४ मा अध्ययनरत बिद्यार्थी मनिसा रोकाले बिद्यालय भवन र कक्षाकोठा मर्मत भएपछि पढ्नलेख्न सजिलो भएको बताउनुभएको छ । चिसोका कारण पहिले पढ्न समस्या हुने गरेको भएपनि अहिलेभने सहज भएको उहाँको भनाइ छ । यता अभिभावकहरुले भने स्थानिय तहले बिद्यालय मर्मतको थालनी मात्रै गरेको बताएका छन् ।
बिद्यालयको भौतिक सुधारसँगै शैक्षिक सुधारका लागि गनुपर्ने काम धेरै भएकाले कक्षाकोठाका खाल्टा टाल्दैमा र भवनको छाना फेर्दैमा बिद्यालयमा सुधार आएको भन्न नमिल्ने एक अभिभावकको भनाइ छ । बिद्यालय संरचनाको सुधारसँगै दरबन्दी अनुसारको शिक्षको व्यवस्था गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।